Semalt: तपाईंको गुगल एनालिटिक्समा रेफरर स्पाम ब्लक गर्न एक सुपर गाईड
Semalt का विशेषज्ञ निक Chaykovskiy, आश्वासन दिन्छ कि रेफरल स्पाम एक समस्या हो जुन वेबमास्टर्सले हाल सामना गरिरहेको छ। वर्षौंको बखत स्थिति बिग्रँदै गइरहेको छ, यसको अर्थ हो कि कोही रेफरल स्पाम सिर्जना गर्दा कहिँ पनि पैसा कमाउँछ।
भूत र रेफरल स्पाम
स्पामले अब गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरूमा आफ्नो बाटो बनाएको छ। स्प्यामरहरू प्रणालीमा कमजोरीहरूको खोजी गर्दछन् ताकि तिनीहरू वेबसाइटको डाटा रिपोर्टहरूमा देखा पर्न सक्दछन्। तिनीहरू यो आशाको आशाका साथ गर्छन् कि वेब साइटले उनीहरूको वेबसाइटमा भ्रमण गर्न किन उनीहरू रिपोर्टमा छन् भन्ने कुराको लागि पर्याप्त उत्सुकता जगाउँछन्। समस्या यो छ कि तिनीहरूले ट्राफिक वृद्धि गर्दैन। उनीहरूले यसलाई बनाउँदैनन् किन कि तिनीहरू बट्स छन्। तिनीहरू जाभास्क्रिप्ट ट्र्याकि code कोड प्रयोग गर्छन् गुगल एनालाइटिक्स द्वारा सूचना बनाउनका लागि एउटा भ्रमण थियो। तिनीहरू बाध्य दरहरू र स elements्लग्नताको विश्लेषण गर्न प्रयोग हुने अन्य तत्त्वहरू जस्ता महत्वपूर्ण स्केकि upहरू समाप्त हुन्छन्। रेफरल स्पामलाई ब्लक गर्न आवश्यक छ यदि कसैलाई सही डेटा चाहिएको छ विशेष गरी यदि उनीहरूले मार्केटिंग निर्णय गर्नमा निर्भर छन्।
यो सिफारिश स्प्याम ब्लक गर्न गाह्रो हुन्छ विशेष गरी जब स्प्यामरहरू धेरै छिटो काम गर्दछन्, स्प्याम हिटको साथै स्रोतहरूको दर बढाउँदै। यसको मतलब वेबमास्टर्सले ती स्रोतहरूलाई हटाउन र कालोसूचीमा राख्ने प्रयासमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो विशेष गरी व्यक्तिलाई कष्टकर हुन्छ जुनसँग नयाँ साइटहरू छन् जसले बढी कानुनी ट्राफिक प्राप्त गर्दैनन्। त्यस्ता साइटहरूमा स्पाम दरहरूको बृद्धिले बढी skewness प्रस्तुत गर्दछ जुन यो प्राप्त गर्दछ दैनिक हिट भन्दा बढि हुन सक्छ।
यो कत्तिको सजिलो छ?
एक पृष्ठ एकल यात्रा को लागी रेकर्ड लोड गर्दछ। भूत स्प्यामरहरूले गुगल एनालिटिक्स ट्र्याकिंग कोड प्रयोग गर्दछ र ट्राफिक डाटा सिधा रिपोर्टमा पठाउँदछ, यसैले भ्रमण फोर्जिंग। यो कहीँ सर्वरमा एकल पृष्ठ लोड गर्न ०.००१ सेकेन्ड लाग्न सक्छ। यद्यपि, तिनीहरूले ती १०० भन्दा बढी जालसाजी भ्रमणहरू सबै अन्य धेरै साइटहरूको गुगल खाताहरूमा भरपर्दछन्। एकल होस्ट किन्न यो एकदम सजिलो छ। जबसम्म स्प्यामरहरू आरओआई बारे निश्चित छन्, त्यहाँ तिनीहरूसँग धेरै क्षतिहरू छन्।
छोटो आउने समाधानहरू
केहि तकनीकहरू कहिलेकाँही उन्नत हुन्छन् कि रेफरल स्प्यामलाई रोक्नको लागि प्रयोग गरिएका समाधानहरूले काम गर्दैनन्। ती मध्ये एक रहस्यमय अनलाईन सेवा हो जुन डरोदर भनिन्छ। निम्नलिखित विधिहरूले यसलाई GA बाट खाली गरेनन्।
.Htaccess फाईल। यो काम गर्दैन किनकि भूत स्प्यामले साइटलाई स्पर्श गर्दैन
रेफरल बहिष्करण सूची। यससँग अद्यावधिकहरूको अभाव छ।
बहिष्करण फिल्टरहरू। यो पुरानो विधि हो किनकि यसले केवल भविष्यमा स्पाममा केन्द्रित गर्दछ र विगतका स्पाम डेटाबेसहरूको लागि retroactive छैन।
बहिष्करण फिल्टर लगभग डरोदर रेफरल स्पाम हटाउनको लागि नजिक आयो। यसको मात्र सीमितता यो थियो कि यो एक स्थिर र लगातार अपडेट रेफरल स्प्यामर सूची छैन।
हराइरहेको पहेली टुक्रा
रेफरल र भूत डाटा पहिचान गर्न र ब्लक गर्न एक कार्यवाही समाधान धेरै अद्यावधिक हुनुपर्दछ, फराकिलो डाटाबेसबाट आउनुहोस्, र विगतका जानकारीमा पूर्वगामी। एक इष्टतम समाधानको लागि तीन तत्वहरूमा आधारित, यहाँ काम गर्ने एक छ।
चरण १: स्प्याम बहिष्कृत गर्न खण्डहरू प्रयोग गर्दै
सेगमेन्टहरू प्रयोग गर्नु उत्तम हो किनभने तिनीहरू स्थायी रूपमा डाटा परिवर्तन गर्दैनन्। यदि एक गल्तिले फिल्टर प्रयोग गर्दा वास्तविक सन्दर्भकर्ता फिल्टर।, तिनीहरूलाई फिर्ता प्राप्त गर्न त्यहाँ कुनै तरिका छैन। खण्डहरू प्रयोग गरेर पुरानो डाटामा निर्माण गर्न सम्भव छ, त्यहाँ लामो समय सम्मको बावजुद। एक तिनीहरूलाई retroactively लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण २: बहिष्करण सूची कायम गर्दै
स्ल्याक एक उपकरण हो जुन वेबमास्टर्सले रेफरल स्रोतहरू अनुगमन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। यसले प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि नयाँ रेफरलको बारेमा सूचित गर्दछ र तिनीहरूलाई प्रोम्ट दिन्छ: श्वेतसूचीमा राख्ने हो कि श black्कास्पद रेफरल स्रोतलाई कालोसूचीमा राख्ने हो।
१. स्ल्याकले सबै सन्दर्भहरू प्राप्त गर्दछ, र
२. यसले PHP लाई सबै परिणामहरूलाई गणनाको क्रममा क्रमबद्ध गर्न प्रयोग गर्दछ, र त्यसपछि वेबमास्टरमा अन्तिम सूची लूप गर्दछ यदि कुनै परिचित देखिन्छ भने। यदि होईन भने
It. यसले सबै संदिग्ध स्पामलाई स्ल्याक च्यानलमा फर्वार्ड गर्दछ जसले प्रयोगकर्तालाई ह्वाइटलिस्ट वा कालोसूची बीचमा विकल्प प्रदान गर्दछ। जुनसुकै विकल्प उनीहरूले छनौट गरे, यसले चरण4लाई पुर्‍याउँछ,
It. यसले पृष्ठमा पुन: र्निर्देशित गर्दछ जसले चयन प्रमाणिकरणको रूपमा निर्णय प्रमाणित गर्दछ।
Sla. स्ल्याकले डाटाबेसमा सबै पहिचान गरिएको स्पामरहरूलाई भण्डार गर्दछ र लक गर्दछ
Clean. सफा डाटाको अन्तिम प्रदर्शन regex ढाँचामा हुनेछ। गुगल एनालिटिक्समा प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्।
स्ल्याकले वेबमास्टरहरूलाई दिनको कम्तिमा पाँच पटक बहिष्करण सूची अपडेट गर्न अनुमति दिन्छ।
वास्तविकतामा, धेरै समाधानहरूले कार्य गर्न सक्दछन्:
यो एक प्रमाणित विधि भए पनि, वेबमास्टरले यसलाई अन्य प्रविधिको साथ पूरक गर्छ भने यो अझ राम्रोसँग काम गर्ने छ, केवल यकीन छ कि तिनीहरूले सबै आधारहरू कभर गर्छन्। भनेका समाधानको अतिरिक्त:
चेकबक्समा क्लिक गर्नुहोस् जसले गुगल एनालिटिक्सलाई ज्ञात बोटहरू र माकुराहरू हटाउन प्रोम्प्ट गर्दछ,
एक "होस्टनाम फिल्टर समावेश गर्नुहोस्" लागू गर्नुहोस्
कुकीहरू प्रयोग गर्नुहोस्
माथि उल्लेख गरिएको समावेशी फिल्टर कहिलेकाँही कुशल हुन्छ, तर लामो समय सम्ममा उत्तम समाधान भने हुँदैन किनभने:
होस्टनाम स्पूफिंग गर्न गाह्रो छैन, र एनालिटिक्स स्प्यामरहरू यसलाई बढि कमजोरको रूपमा प्रयोग गर्दैछ।
यदि सेटअप गलत छ भने, यसले वास्तविक सन्दर्भकर्ताहरूलाई फिल्टरि end गर्न सक्दछ।